सङ्क्रमण समाधानपछि वीरगञ्ज क्षेत्रको विकास : अपेक्षा र यथार्थ | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) सङ्क्रमण समाधानपछि वीरगञ्ज क्षेत्रको विकास : अपेक्षा र यथार्थ
यथार्थमा आधारित बजेट बनाइनुपर्छ
सरकारले बनाउने बजेट राजनीतिक दलको घोषणापत्रजस्तो हुने गरेको छ । यस्तो बजेटको उपादेयता हुँदैन । यथार्थमा आधारित बजेट बनाइनुपर्दछ । यसो भएमा विकासको गति अपेक्षित हुने आशा बन्न सकिन्छ । सबैलाई खुशी पार्ने मनसायले ल्याइएको बजेट सफल हुँदैन । सरकारले अहिले सिण्डिकेट, कार्टेलिङ नियन्त्रणका कुरा गरिरहेको छ । यो सबै लोकप्रियता हात पार्ने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित छ । सरकारले आयल निगमको मनपरी किन देख्दैन ? सरकार आफै कार्टेलिङ गरिरहेको छ । सरकार गोलकिपरको भूमिकामा रहनुपर्छ, न कि खेलाडी ।
जलविद्युत् उत्पादनको चर्चा निकै भएको छ । तर, प्रसारण लाइनको विस्तारमा सरकार उदासीन देखिएको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारी यसमा प्रभावकारी हुन सक्छ । तर, यो अवधारणामै सीमित भएको छ । अहिलेसम्म चेम्बर कानून बनाइएको छैन । निजीक्षेत्रको मनोवृत्तिमा पनि सुधार हुन जरुरी छ । सङ्घीयतामा गए पनि अधिकार प्रत्यायोजनको मानसिकता देखिएको छैन । यसले सङ्घीयताको सार्थकता हुँदैन ।
सहकार्यका लागि निजीक्षेत्र तत्पर छ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
अहिलेसम्म सङ्क्रमण समाधानको जिम्मेवारीलाई देखाएर विकासलाई पञ्छाउने काम भएको थियो । अब तीनै तहको सरकार अभ्यासमा आइसकेकोले सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेको छ । यस कारण पनि विकासको एजेण्डामा एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । विकास नै अबको एजेण्डा हुनु पर्दछ । विगतका जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा वीरगञ्जको भूमिका सबैलाई विदितै छ । अब तीव्र विकास वीरगञ्ज र यहाँका बासिन्दाको अपेक्षा हो । उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन यो क्षेत्रका विकासका आधार हुन् । यसको अत्यधिक दोहन हुनुपर्दछ । यसका लागि भौतिकसँगै कानूनी पूर्वाधारको आवश्यकता छ । लगानीमैत्री ऐेननियम बनाइनुपर्दछ । विकासका सरोकारमा सरकारसँग सहकार्यका लागि निजीक्षेत्र सधैं तत्पर छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्दछ ।
सरकार र निजीक्षेत्र दुवै ठीक हुनुपर्दछ
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
बारा–पर्सा क्षेत्रमा उद्योग फस्टाउन सक्छ । तर, यसमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको नियत ठीक हुन आवश्यक छ । कच्चापदार्थको मूल्यमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासी सम्भव हुँदैन । यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । यसैगरी निजीक्षेत्रले पनि आफूलाई अति अवसरवादी बनाउनु हुँदैन । जस्तै– एकपटक घीउ उद्योगमा यति धेरै लगानी भयो, भारततिर घीउ अधिक निकासी भयो । अन्ततः भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि त्यस्ता उद्योग बन्द नै भए । अहिले चिनी र मरिचको आयातमा त्यही अवस्था छ । खपतभन्दा अत्यधिक बढी आयात किन हुन्छ ? स्वाभाविक छ, यसबाट छिमकी देश सशङ्कित हुन्छ । हामीले दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्नुपर्छ । विकासका संरचना दाताको मुख ताकेर मात्र हुँदैन । हामीले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सक्यौं भने मात्र प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । उद्योगमा ट्रेड युनियनको आवश्यकता छैन । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा समस्याका बारेमा जानकार मानिसको अभावले जिल्ला तहका उद्यमीले समस्या भोगिरहेका छन् । यस कारण श्रमऐन उद्योगमैत्री हुन सकेन ।
उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति चाहिन्छ
उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
बारा र पर्सा क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकस्तरका बारेमा सार्वजनिक भइरहेको तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि यहाँको विकासका प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सङ्क्रमणले निकास पाए पनि सङ्घीयताको सञ्चालन र यसको खर्च अहिलेको मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफूलाई अधिकार नभएको गुनासो गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कस्तो विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यस कारण सबैभन्दा पहिला यस्ता अन्तरविरोधको समाधान हुनुपर्दछ । बजेटमा राजनीतिक रुचि न्यूनीकरण हुनुपर्दछ । यथार्थ आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट र बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । उद्योग र व्यापारमा हामीले कस्तो नीति लिने हो, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । सरकारले आयातलाई बढावा दिने कि उद्योगलाई, त्यसको स्पष्ट नीति आउनुपर्छ । अहिलेजस्तो दोधारे नीतिले विकास अघि बढ्न सक्दैन । उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति चाहिन्छ । उद्योगको विकास नै रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार हो ।
निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिमा खोट छ
विकासका लागि सही तरीकाले समस्याको पहिचान हुनुपर्दछ । नेताहरूले चुनावअघि यो पनि गर्छौं, त्यो पनि गर्छौं भनेका थिए । अहिले बजेटको अभाव देखाउँछन् । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई नगर क्षेत्र घोषणा गरिरहेको छ । तर, त्यहाँ विकासका न्यूनतम पूर्वाधार पुर्‍याउन सकेको छैन । घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, विकास पनि पुर्‍याउन सक्नुपर्दछ । सङ्क्रमणकालको बहानामा विकास रोक्ने काम भयो । तर, नेतृत्वले चाहेको भए सङ्क्रमणले विकास रोकिने होइन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिमा खोट छ । उद्यम व्यापारमा सधैं नाफा मात्र हुँदैन, घाटा पनि हुन्छ । तर, सरकारले त्यसलाई मान्दैन । सरकारले चलाएका उद्योग घाटा मात्र होइन, घाटा थेग्न नसकेर बन्द नै भएका छन् । तर, निजीक्षेत्रले चलाएका उद्योगमा घाटा देखाइए त्यसलाई सरकारले किन नमान्ने ? यस्तो द्वैध मापदण्ड हुनु हुँदैन । सरकारी निकायका कुनै पनि कामबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् । माथिल्लो निकायको नाममा जिम्मेवारी पन्छाउने परिपाटीले अव्यवस्था मौलाएको छ ।
श्रमऐन लगानीमैत्री भएन
अध्यक्ष, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च
सङ्क्रमणकालमा विकास गर्नै नसकिने भन्ने होइन । तर, अब सङ्क्रमणले निकास पाइसकेको अवस्थामा विकासमा अघि बढ्नैपर्दछ । तर, अहिलेसम्म तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट भएको छैन । यसको टुङ्गो लाग्नुपर्दछ । सरकारी सेवामा भ्रष्टाचार बढेको छ । विकासमा आईएनजीओको हस्तक्षेपले बेथिति बढाएको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रको विशिष्टता उद्योग र व्यापार हो । तर, तरलताको समस्याका कारण यो क्षेत्रले सहजता महसूस गरेको छैन । समस्यामा काम गरिरहेको छ । सरकारले गरीबी निवारण गर्ने भने पनि त्यो भाषणमा मात्र सीमित भएको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले २०औं वर्ष पुराना समस्या खोतलेर उद्यमीलाई दुःख दिने काम गरेका छन् । त्यति बेला ग्रामीण क्षेत्र थियो । उद्योग बनाउँदा नक्सापासको व्यवस्था थिएन । अहिले नक्सा खोजेर झमेला खडा गरिएको छ । श्रमऐन उद्योगमैत्री छैन । १ दिन काममा लगाएको कामदारलाई पनि स्थायी मानेको छ । श्रमऐनले उद्यमीलाई जेल हाल्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तोमा उद्योगमा कसरी लगानी आउँछ ? उद्योगीले नाफाको १० प्रतिशत कामदारलाई बोनस दिने गरेको छ । यस कारण कामदार पनि उद्योगको साझेदार हो ।
उद्योग र व्यापार विकासको आधार
कोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
उद्योग र व्यापार यो क्षेत्रको विकासको आधार हो । कृषि र पर्यटनको चर्चा भए पनि त्यसको सम्भाव्यता त्यति राम्रो देखिएको छैन । यस कारण यहाँ तत्काललाई उद्योग र व्यापारलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । उद्योग व्यापारमैत्री नीतिको खाँचो छ । श्रमऐन उद्योगमैत्री हुनुपर्दछ । उद्योग र व्यापारको बढावाका लागि २ नम्बर प्रदेशले बेग्लै ऐन नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उद्योगका लागि विद्युत्को गुणस्तरीय प्रबन्ध हुनुपर्दछ । अहिले विस्तार भइरहेको ६ लेनको सडकमा विद्युत्को तारलाई अण्डरग्राउण्ड गरिनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षाको बलियो प्रबन्ध हुनुपर्दछ । यसका लागि बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा मदिराको विक्रीवितरण प्रतिबन्ध गरिनुपर्दछ । यसबाट शान्ति, सुरक्षामा सुधारका साथै दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ ।
अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्दछ
राजेश क्याल, निर्देशक, क्याल समूह
विकासको कुुन काम कसले गर्ने भन्ने निर्क्योल हुनुपर्दछ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकासको जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँट भइसकेको छैन । त्यसका लागि कानूनहरू निर्माणकै चरणमा छन् । सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर विकास बजेट उपलब्ध गराइनुपर्दछ । स्थानीयस्तरमा हुने सरसफाइ, ढल तथा नालाको उचित व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको सक्रियता हुनुपर्दछ भने केन्द्रस्तरबाट हुने योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारका आफ्नै योजना हुन सक्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, खानेपानी, सञ्चारजस्ता अत्यावश्यकीय विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्र बनाइनुपर्दछ । वीरगञ्जबाट अझै पनि उपचारका लागि काठमाडौं वा भारतीय शहरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यसको निदानका लागि सरकारी स्तरबाट एउटा मेडिकल कलेजको स्थापना हुनुपर्दछ । यसबाट स्वास्थ्योपचार र जनशक्ति उत्पादनमा सघाउ पुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको पहुँच बढाएर यातायातलाई सहज बनाउनुपर्दछ । आर्थिक नगर भनिए पनि व्यवस्थित विकास हुन सकेको छैन । वीरगञ्जलाई स्मार्टसिटीको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । यसको फाइदा देशलाई नै हुन्छ । बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र द्रुतमार्गलाई चाँडै पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने यो क्षेत्रको विकासले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन । उद्योग–व्यापारको विकासका लागि लगानीमैत्री नीति र नियमको अभाव छ । उद्योग र व्यापार वीरगञ्ज क्षेत्रको मात्र नभएर २ नम्बर प्रदेश र सिङ्गो अर्थतन्त्रको आधार भएकाले यसलाई बढावा दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । बाराको सिमरामा बनाउने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई चाँडो निर्माण गरी त्यसको उपयोग गरिनुपर्दछ । औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि इञ्जिनीयरिङ कलेज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । पर्यटन विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । बारा र पर्सा जिल्लामा धार्मिक पर्यटकीय महŒवका कयौं स्थान छन् । बाराको गढीमाई त विश्वमै प्रसिद्ध छ । यस्ता महत्त्वको प्रचारप्रसार र आवश्यकीय पूर्वाधार विकास जरुरी छ ।
नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ
निर्देशक, चाचान समूह
वीरगञ्ज आर्थिक गतिविधिको स्रोत भएर पनि यहाँको सामाजिक विकासका आयाम निकै पछिपरेको तथ्यहरूले देखाएका छन् । यो एकप्रकारले राज्य सञ्चालकमा दूरदृष्टिको अभावको परिणाम पनि हुन सक्छ । सम्भवतः यस्तै असमानता र असन्तुष्टिको जगमा मधेसमा आन्दोलन भयो । र, पछिल्लो आन्दोलनको केन्द्र पनि वीरगञ्ज नै बन्न पुग्यो । अहिले वीरगञ्जको स्थानीय सरकार मात्र नभएर प्रादेशिक सरकारमा आन्दोलनका अगुवा अर्थात् परिवर्तनका पक्षधर स्थापित भएका छन् । यसलाई वीरगञ्ज मात्र नभएर सिङ्गो २ नम्बर प्रदेशकै विकासका लागि अवसर प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ । यो अहिलेसम्मका शासकीय र प्रशासनिक बेथितिलाई किनारा लगाएर अपेक्षित विकासको उद्देश्य साकार पार्ने आधार पनि हो । तर, स्थापित नेतृत्व वर्गबाट स्रोतसाधनको अभावलाई विकासको अवरोधको कारणको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यो क्षेत्रलाई स्रोतविहीन भूगोलको रूपमा चित्रित गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थमा त्यस्तो होइन । सङ्घीयता तुलनात्मक खर्चिलो भएकाले यसको व्यवस्थापनमा स्रोतसाधन बढी चाहिने सत्य भए पनि नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हुने हो भने स्रोतसाधनको कमी विकासको अवरोध बनिराख्न सक्दैन । यसका अन्य विकल्प तयार हुन सक्छन् । वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग र व्यापारको केन्द्र हो । यो समग्र प्रदेशको आर्थिक आधार पनि हो । साथै, यहाँ कृषि र धार्मिक पर्यटनको पनि सम्भावना विद्यमान छ । यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय नेतृत्वको सोच र दक्षतामा भर पर्दछ । अर्कातिर वीरगञ्ज लगानीकर्ताको कर्मभूमि पनि भएकाले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको खण्डमा विकासका नयाँ आयाममा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुन नसक्ने कुनै कारण छैन । यसका निम्ति सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको पूर्वाधार चाहिन्छ ।
विकासबारे चेतनाको खाँचो छ
निर्देशक, काबरा समूह
विकासको आवश्यकताका बारेमा स्थानीय बासिन्दामा जागरुकता हुनुपर्दछ । विकासमा स्थानीयको सहभागिता भएमा यो प्रभावकारी हुन्छ । नजीकैको हेटौंडा सरसफाइमा नमूना शहरको रूपमा पर्दछ । हामीकहाँ यो सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा छ । यसबारे चेतनाको खाँचो छ । स्थानीय सरकारहरू स्रोतको अभाव भयो भनिरहेका छन् । स्थानीय बासिन्दाले सेवा र सुविधाको कुरा गरे पनि कर बुझाउने मामिलामा उदासीनता देखिन्छ । कर बुझाउनुलाई नागरिकले दायित्व सम्झिनुपर्छ । सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । सङ्घीय सरकारले भन्सारबाट आउने राजस्व बढाउने नीति लिएको छ । तर, यो नीतिअन्तर्गतको कडाइ भन्सारका कर्मचारीलाई कमाउने औजार बनेको छ । शिक्षा विकासको आधार हो । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रमा राम्रा शिक्षण संस्था नहुँदा यहाँबाट वर्षेनि शिक्षाका लागि बाहिरिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । स्वयम् नेताका छोराछोरी नै भारतका विभिन्न शहरमा पढिरहेका छन् । खेलकुद, मनोरञ्जनलगायतको प्रबन्ध छैन । विकासका यस्ता न्यूनतम् पूर्वाधार बनाउने काममा नेतृत्व गम्भीर हुन सकेको छैन । वीरगञ्जको सिर्सियामा नगर विकासले गरेको जग्गाको प्लटिङमा नयाँ बस्ती विकास हुनुपर्दछ । यातायात र पारवहनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । यसमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । कार्यान्वयनका निम्ति प्रभावकारी नियम कानूनको निर्माण अनिवार्य छ । विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय र समान वैचारिक धरातल भएमा सहज हुने अभ्यासले देखाएका छन् ।
पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्दछ
सचिव, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
देशको मुख्य राजस्व सङ्कलनको केन्द्र भएर पनि वीरगञ्जमा विकास अपेक्षित भएको छैन । यहाँ अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको समेत अभावको सामना गर्नुपरेको छ । हालै उद्घाटन भएको एकीकृत जाँचचौकी अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने सुक्खा बन्दरगाह साँघुरो भइरहेको छ । तर, क्षेत्र विस्तारको योजना अघि बढेको छैन । मुख्य आयात–निर्यातको नाका भए पनि पारवहनका पूर्वाधारको समुचित प्रबन्ध छैन । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाइनुपर्दछ ।
सङ्क्रमण निकासमा अझै आशङ्का
राजनीतिक सङ्क्रमणकाल समाधान भएको भनिए पनि यसले साँच्चै निकास पाएको हो कि होइन भन्नेमै आशङ्का देखिएको छ । सङ्क्रमण समाधान भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसअनुसार विकास गतिविधि अघि बढेका छैनन् । आवश्यकीय कानूनको अभावमा प्रदेश सरकार काम नपाएर बसेको छ । यसले विकासको उद्देश्य सहज हुँदैन । वीरगञ्ज क्षेत्रको विकासका लागि यो क्षेत्रलाई कुनै विशिष्ट पहिचान दिन सक्नुपर्दछ । जस्तो कि, वीरगञ्जलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । यहाँको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारको खाँचो छ । शिक्षित जनशक्तिमा दक्षता पाउनु कठिन काम भएको छ । यो शिक्षामा गुणस्तरको कमीले भएको हो । वीरगञ्जलाई प्लाष्टिकको झोलामुक्त शहरको नमूनाको रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने पनि यसले नयाँ र सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । यो क्षेत्र उद्योग र व्यापारको क्षेत्र हो । तर, पूँजीको समस्या छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क केन्द्रीकृत हुँदा यहाँको शाखा देखावटी मात्र भएको छ । यसले गर्दा बैङ्किङसँग सरोकार राख्ने समस्याको समाधान सहज हुन सकेको छैन ।
जेल जान उद्योग खोले पुग्छ
सहसचिव, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
केही अघिसम्म आर्थिक उदारीकरणको कुरा खुबै भयो । अहिले समृद्धि शब्द निकै प्रचलित भएको छ । तर, समृद्धिको टेकोमा सरकार बनेको यति दिन बित्दा त्यसको जुन खाका देखिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । सिण्डिकेट समाधानका नाममा सरकारले यातायात व्यवसायी र सुन तस्करलाई समात्ने कामबाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भन्सार, मालपोत, वनजस्ता निकायमा खुलेआम घुस चल्छ । स्थानीय सरकारको योजनामा त्यस्तै बेथिति छन् । यसको नियन्त्रणलाई सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । कृषि विकासको आधार हो । तर, यो निर्वाहमुखी मात्र भइरहेको छ । सन् १९७७ सम्म नेपालबाट धान र चामल निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको त चामल नै आयात हुन्छ । यहाँका चामल उद्योगले धान पनि आयात गर्छन् । अब निर्वाहमुखी कृषिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्दैन । कृषिको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरणमा जानुपर्दछ । उद्योग र व्यापारको कुुरा गर्दा अहिलेको श्रमऐन उद्योगमैत्री छैन । यसका प्रावधान हेर्दा जेल जान लागि अब उद्योग खोले पुग्ने भएको छ ।
विकासमा समुदायको सहभागिता हुनुपर्दछ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानो पाइला
विकास वीरगञ्जको बाटो भएर गए पनि यहाँ नरोकिनु समस्या हो । विकासलाई कसरी यहाँ स्थापित गर्ने भन्ने मूल कुरा हो । निर्वाचनपछिको राजनीति जनताको अपेक्षाविपरीत जान थालेजस्तो देखिन्छ । विकासका काम अपेक्षित अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा बरु जनप्रतिनिधि नभएको बेला काम भएको हो कि जस्तो लाग्नु स्वाभाविक छ । वीरगञ्ज क्षेत्रको विकास असम्भव काम होइन । १० प्रतिशत समस्यालाई देखाएर सम्भावनाको सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन । वीरगञ्ज सम्भावना भएको ठाउँ हो । वीरगञ्जको भौगोलिक अवस्थिति र यहाँका उपलब्ध पूर्वाधार सम्भावनाका आधार हुन् । नयाँ आशाका साथ भएका सम्भावनाको दोहन गर्दै नयाँ सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्दछ । समावेशी विकासको खाँचो छ । विकासमा लक्षित समुदायको सहभागिता र प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । त्यसो भएन भने विकासको उपादेयता हुँदैन ।
नेतृत्वमा दूरदर्शिता भएन
जसपाल सिंह, सामाजिक अभियन्ता
विकासका सवालमा राज्यले वीरगञ्जलाई विभेद गरेकै हो । तर, हामीले लिन नजानेको पनि हो कि ? यसमा मन्थन आवश्यक छ । वीरगञ्जको विकासलाई अघि बढाउन नेतामा दूरदर्शिता भएन । नेतृत्वले विज्ञहरूको पहिचान गरी उपयोग गर्न पनि सकेको छैन । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । नियन्त्रणका प्रयास अपेक्षित प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । आफैबाट सुधारको थालनी भए मात्रै यो सम्भव हुन सक्दछ । विकासका लागि आफ्नो स्रोतको दोहन हुनुपर्दछ । हरियाली जोगाउन आवश्यक छ । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षणलाई पनि विकासको आधार बनाउनुपर्दछ । वीरगञ्जको सिर्सिया नदीलाई बारा र पर्साका उद्योगले प्रदूषित बनाएका छन् । यो रोकिनुपर्दछ । उद्यमी व्यवसायी नाफा कमाउनेतर्फ मात्र होइन, सामाजिक काममा पनि लाग्नुपर्दछ ।
उद्यमी पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्‍यो
कार्यसमिति सदस्य, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ
नेपालको मजदूर र विद्युत्को सम्भाव्यता उपयोग हुन पाएको छैन । यहाँबाट कामदार बाहिरी देशमा गएर काम गरिरहेको छ । तर, यहाँ कामदारको अभाव छ । उद्यम व्यवसायले आफूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । विभिन्न आन्दोलनमा वीरगञ्जले योगदान मात्र दिएको छैन, त्यस क्रममा समस्या पनि झेलेको छ । तर, त्यसको परिपूरणमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएनन् । बितेको नाकाबन्दीको बेलाको क्षतिपूर्ति पाइएन । त्यसको असर अहिलेसम्म पनि भोग्दै छौं । राजनीतिक नेताहरूले वीरगञ्जमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काम मात्र गरे । सङ्घीयताको अबको ५ वर्ष त ऐनकानून बनाउँदै सकिन्छ । यो समयमा आगामी दिनका लागि अघि बढ्ने बाटो मात्र बन्न सक्यो भने त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्दछ ।